Sir culus: Hadhaagii kooxda Itixaad oo ku Howlan Qorshe Cabdi iley kadhan ah. | ogaden24
Sir culus: Hadhaagii kooxda Itixaad oo ku Howlan Qorshe Cabdi iley kadhan ah.
Hadhaaga kooxdii bur-burtay ee Al-itixaad labaxay UWSLF ee maamulka Woyanaha isu dhiibay sanadkii 2010, oo Khilaaf xoogani kala dhexeeyo Horjoogaha maamulka Jigjiga ayaa ku Guda Jira Ol’ole balaadhan oo ay kudoonayaan inay meesha kaga saaraan Horjooge Cabdi iley.
Khilaafka Labada dhinac ayaa Sababay inay inta badan Saraakiishii UWSF(Al-Itixaad) ka cararaan Guud ahaan Ogadenia, waxayna soo dhowayn aan diiranayn kaheleen maamulka Woyanaha oo u Ogolaaday inay salka dhigtaan magaalada Addis ababa, waxayna iyaga oo Garab kahelaya saraakiil katirsan sirdoonka Woyanaha Hawlahooda si Gaabis ah uga wateen magaalada Addis ababa.
Kooxda ayaa sidoo kale waxay Gaashaan buuraysteen Horin Horay uga tirsanaa maamulka Jigjiga oo iyaguna ka cararay Horjooge Cabdi iley, kuwaasi oo Addis ababa iska xaadiriyay xiliyo kala dambeeyay waxayna Labadaasi Garab si Joogta ah dacwado kadhan ah Kooxda Jigjiga ugu Gudbinayeen cid kaste oo ay Aaminsan yihiin inay wax uun Yeeli karto si meesha looga saaro Horjooge Cabdi iley.
Labada koxood ee Heshiiska ku ah la dagaalanka kooxda Jigjiga ayaa 2-dii bilood ee u damabaysay waxay xoojiyeen dadaalkooda ay kudonaayaan inay kaga Takhalusaan Kooxda Jigjiga oo Laf dhuun Gashay kunoqotay, waxayna kooxahani fursado badan ka helayaan Laanta sirdoonka ee maamulka Woyanaha oo Qaab Laba Wajiilenima ah kusocota.
Saraakiisha sirdoonka Woyanaha ayaa Hadhaagii kooxda Itixaad waxay si dhow ugala shaqeeyaan arimaha Gudaha wadanka Somaaliya oo xogaha uga soo Gudbiyaan, waxayna taasi u sahashay Hadhaaga kooxda Itixaadka in la maqlo warkooda ugu yaraan loo fuliyo dalabkooda laxidhiidha is badal lagu sameeyo maamulka Jigjiga, halka kooxda kale Hore maamulka uga tirsan ay iyaguna xoojinayaan dalabka Jawaasiista kooxdii Itixaad kahadhay.
Marka laga gudbo wada shaqeynta labadaasi koxood ayaa waxaa bilihii la soodhaafay xoogeystay Hadhaagii Itixaad oo dardar horle oo shirar qar soodi ah ku Qabsanaya Magaalooyinka Hargeysa iyo Nairobi.
Waxaa Jira shakhsiyaad kooban oo katirsan kooxdii Itixaad oo wali kusugan magaalada Jigjiga lana shaqeeya Kooxda Kililka ku magacaaban, waxay se shakhsiyaadkaasi Qaab sirdoon ah xogta ugu Gudbiyaan oo si Joogta ah ugu xidhan yihiin xubno katirsan Horjoogayaashii kooxda oo ku kala sugan dalalka Geeska Africa gaar ahaan magaloyinka, Nairobi, Hargaysa, Muqdisho Kismaayo Garissa iyo meelo kale.
Magaalada Nairobi waxay kooxda Joofgta oo ah kuwa ugu fir-fircoon ku Qabsadeen shir Qarsoodi ah, waxaana shirkaasi soo xaadiray shakhsiyaadka ugu miisaanka culus oo ay kamid yihiin.
Sheekh Ibraahin Dheere Gudomiyaha UWSF.
Khaalid Sheekh Abdullahi-Taliyha Sirdoonka Jubbaland.
Sheekh Axmed Nashaad Gudomiyihii Golaha dhexe
Jacfar Sheekh Cali Gudoomiyaha Jaaliyada DDSI-Kenya.
Ahmed Nuur Sahal-Hogaanka Dhaqaalaha UWSLF.
Iyo dhowr Sargaal oo kale,waxaana shirka si Toos ah oo loogu Lafa Guray Qaabka iyo sida ugu Haboon ee Cabdi iley meesha looga saaro karo, waxaana shirku uu daba socday shirar Hore uga dhacay magaalada Hargaysa iyo waliba Muqdisho.
Xogtan oo aad u xasaasi ah Qaybaheeda dambe kala soco Ogaden24 hadii Alle Idmo